जन्मदिनको शुभकामना राजकरण ! - The Public Today
जन्मदिनको शुभकामना राजकरण !
३ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:४४
यसो मान्छेको जमघटबीच लगातार बोलेर नथाक्ने कालो दा¥ही पालेको ३० बर्ष हाराहारीको युवक महोत्तरीको बर्दिवास सेरोफेरोमा देख्नु वा भेट्नु भयोभने यो मान्छे राजकरण महतो हुनसक्छन् भन्ने तपाँईको लख कटाई ठ्याक्कै मिल्न पनि सक्छ । हजुर, मैले तपाँईलाई बताएको यो ‘हुलीया’ पत्रकार राजकरण महतोकै लागि हो ।
महतो भन्न वित्तिकै बर्दिवासवासीलाई पछिल्लो एकदशकयता मुख्य कर्मथलो बर्दिवासक्षेत्रलाई बनाएर यहाँका प्रत्येक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका कृयाशील पत्रकारको परिचय ठ्याक्कै बन्छ । हुन पनि, बर्दिवास क्षेत्रका सार्वजनिक चासोका कुरा आफ्नो कलमबाट पस्केर महतो कहिल्यै थाकेनन् । समयक्रममा अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकको प्रदेश–२ कार्यालय जनकपुरधाममा मुख्य कामको जिम्मेवारी भएपनि महतो एकछिन समय पाउनासाथ बर्दिवास आइपुग्छन् ।
बर्दिवास–१३ बिजलपुराको अकुवानटोल राजकरणले धर्ति टेकेको ठाउँ हो । बिजलपुराहुँदै एकदशकअघि उच्चशिक्षा पढ्न बर्दिवासस्थित नवक्षीतिज क्याम्पस बर्दिवास (हाल–, बर्दिवास–१४) सँग नाता जोडेका महतोले अध्ययनसँगै पत्रकारितासँग साइनो जोडे । खासमा भनौं भने महोत्तरीको उत्तरीक्षेत्रका ज्वलन्त सबैक्षेत्रको रिपोर्टिङ्ग गर्न उनले भ्याएका छन् ।
सूचनामा राम्रो पहुँच पु¥याउने राजकरण मानवीय सम्वेदनाले भरिभराउ युवा हुन् । यिनी कसैको दुःख देखेपछि द्र्रवित भई हाल्छन् । खासमा रिपोर्टिङ्गको यिनको क्षेत्र नै रोग, भोक र शोकले गाँजेको बस्ती हुने गरेको छ । म ऐले सम्झन्छु–, यसै सम्वेदनाले गर्दा महतोले धुर्मुस–सुन्तलीलाई बर्दिवासको मुसहर बस्ती पु¥याएका हुन् । जहाँ, अहिले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती बर्दिवासकै मुख्य पर्यटकीयस्थलको रुपमा बिकास गरेको छ । बर्दिवास–१४ स्थित यो बस्तीमा ऐलेपनि राजकरण त्यहाँको दुःखशुःखमा सँगसाथ रहँदै आएका छन् ।
प्रेस सङ्गठन नेपालका महोत्तरी संयोजकसमेत रहेका पत्रकार महतो महोत्तरीको सन्दर्भमा भन्दा आसलाग्दा, भरलाग्दा र पत्रकार आचारसंहिताको यथासक्य परिपालना गर्ने जेहेन्दार पत्रकार हुन् ।
आज (वैशाख–३ गते) राजकरणको जन्मदिन हो । यिनी आफ्नो जन्मदिन पनि केक काट्ने, भोज आयोजन गर्नेभन्दा फरक ढङ्गले मनाउने गर्छन् । गतवर्षमात्र यिनले आपूmले माध्यमिक शिक्षा लिएको बर्दिवास–१३ डाँडाटोलस्थित जनता माध्यमिक बिद्यालयमा छात्रवृति कोष सञ्चालनको घोषणा गरेर फरक पन देखाई सकेका छन् । यिनको कामप्रतिको लगन ‘डाह’ लाग्दो छ । अहिलेको नयाँ पुस्ताले यिनीप्रति सकारात्मक ‘डाह’ गरुन् भन्ने लाग्छ ।
खासमा आज राजकरणको जन्मदिनले मलाई केही शुभकामनाका शब्द लेख्न घचघच्यायो । म उनीसँग जे राम्रा गुण छन् , ति झ्याङ्गिदै जाउन् र सँधै सकारात्मक उदाहरणमा यिनलाई उभ्याई रहन पाउँभन्ने कामना गर्दछु । खोट नभएको मान्छे हुन्न रे..! अन्त्यमा, राजकरणको ‘खोट’ के पहिल्याउँ ? तिमी सुनाउनेभन्दा बढी सुन्ने बानी बसाल , अहङ्कारको लेस पनि तिमीभित्र प्रवेश नपाओस् । विनम्रता र विनयशीलता दुबै एकै कुरा हुन् , तिमीमा यो पक्ष सवल बन्दै जाओस् । जन्मदिनको शुभकामना…!! (गोपाल बरालको फेसबुक वालबाट)
प्रदेश २ मा १८ हजार नागरिक भारतबाट फर्किए
कोरोनाको भ्याक्सिन यसै वर्षको अन्तमा विश्वबजारमा आउने दाबी
लागूऔषधसहित सर्लाहीमा एक पक्राउ
क्वरेन्टीनमा बसेका व्यक्तिद्वारा आत्महत्या
कोरोना महामारीका कारण मुसालाई पनि सास्ती !
निजी विद्यालयले सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने
एउटा गाउँपालिकामा ७३ जना कोरोना संक्रमित
Share 3505 Tweet 59
मरेको छैन मानवता !
Share 1332 Tweet 50